Virtual, Chikumi 13-17, 2022
Bhalisa naApril 15 pa https://iwcamembers.org/
Mari yekunyoresa: $400
Zvishoma zvipo zviripo - zvikumbiro zvakafanira Kubvumbi 15
Bhalisa kuburikidza https://iwcamembers.org/. Sarudza iyo 2022 Summer Institute. Hunhengo muIWCA hunodiwa.
Yegore rino IWCA Summer Institute inogona kupfupikiswa mumashoko mana: chaiwo, epasirese, anochinjika, uye anowanikwa. Joinha isu kune yechipiri virtual Summer Institute June 13-17, 2022! Iyo SI tsika inguva yekuti vanhu vatize mabasa ezuva nezuva uye kuti vaungane seboka, uye nepo kuti iwe unobva kure nezvinhu zvechivanhu uri kwauri, boka regore rino richanakidzwa nemukana wekuita. nyatso batana nevanyori venzvimbo yekunyora pasi rese. Kuti uwane shanduro yakadhindwa, tinya pa 2022 SI Tsanangudzo. Kungofanana nemakore apfuura, vatori vechikamu vanogona kuvimba nechiitiko kuti chisanganise musanganiswa une rupo we:
Yakazvimirira chirongwa nguva
Mumwe-on-one uye boka duku mazano
Kubatana nenhengo dzeboka
Mamwe mabasa anonakidza
Chirongwa Chemazuva ese neZuva Nguva
Kana iwe uchida rumwe ruzivo nezve izvo varongi uye vatungamiriri vemasangano vakakurongera iwe, ndapota tarisa iwo marongero, ayo anopa zuva-nezuva-zuva, awa-ne-awa mafambiro. Kuti zvikuitire nyore, zvakagadzirirwa nzvimbo dzakasiyana-siyana ina. Kana yako isina kupihwa pano, ndapota nyorera varongi, avo vachakupa imwe yakatarwa kunzvimbo yako.
Wese maworkshops achaitwa kuburikidza neanopindirana, mhenyu yekutepfenyura chikuva uye kusimudzira kwehunyanzvi uye zvimwe zvinhu zvichave zviripo asynchronously. Nekuda kwemitengo yakaderera yekutambira SI ingangoita, kunyoreswa kunongova $400 (kazhinji, kunyoreswa kuri $900). Zvinyoreso makumi mana chete zvichagamuchirwa. Tichatanga rondedzero yekumirira mushure mekunyoresa makumi mana.
dzosera Policy: Kudzoserwa kuzere kuchawanikwa kusvika mazuva makumi matatu chiitiko chisati chaitika (Chivabvu 30), uye hafu yekudzoserwa ichave ichiwanikwa kusvika mazuva gumi nemashanu chiitiko chisati chaitika (Chivabvu 13). Hapana kudzoserwa kunozowanikwa mushure meizvozvo.
Ndokumbira utumire email kuna Joseph Cheatle pa jcheatle@iastate.edu uye/kana Genie Giaimo pa ggiaimo@middlebury.edu nemibvunzo.
Kana iwe uchida kunyoresa uye iwe hausati wava nhengo, nyoresa kuIWCA nhengo account pa https://iwcamembers.org/, Wobva wasarudza iyo 2022 Summer Institute.
Joseph Cheatle (iye/iye) ndiye mutungamiriri weKunyora neMedia Center paIowa State University muAmes, Iowa. Aimbove Associate Director weThe Writing Center kuMichigan State University uye akashanda senyanzvi yekupa mazano kuCase Western Reserve University uye mudzidzi akapedza kudzidza kuMiami University. Mapurojekiti ake ezvino ekutsvagisa anotarisa pane zvinyorwa uye ongororo munzvimbo dzekunyora; kunyanya, anofarira kuvandudza kushanda kwemaitiro edu ezvino zvinyorwa kuti ataure zvinobudirira uye kune vateereri vakawanda. Aive chikamu chechikwata chekutsvagisa chaitarisa magwaro epanzvimbo yekunyora akagamuchira mubairo weInternational Writing Centers Association Outstanding Research Award. Akaburitswa mukati tsika, WLN, Uye Chinyorwa chekunyora Analytics, kairos, The Kunyora Center Chinyorwa, Uye Chinyorwa cheCollege Student Development. Semutungamiri, anofarira nzira yekupa mikana yebudiriro yehunyanzvi kuvashandi nevarairidzi nenzira yekutsvagisa, mharidzo, uye zvinyorwa. Anofarirawo kuti nzvimbo dzekunyora dzinopa sei rutsigiro rwakakwana kuvadzidzi kuburikidza nekubatana nevabatsiri vekambasi uye kurudziro yezviwanikwa. Aimbove Mumiriri weAt-Large paIWCA Board, aimbova nhengo yeEast Central Writing Centers Association Board, uye aimbove sachigaro-sachigaro weIWCA Collaborative @ 4Cs. Aive zvakare Co-sachigaro weZhizha Institute 2021 naKelsey Hixson-Bowles. Akamboenda kuSummer Institute muna 2015 yakaitirwa kuEast Lansing, Michigan.
Genie Nicole Giaimo (SI Co-Chair, ivo) ndiye Mubatsiri Purofesa uye Director weChinyorwa Chekunyora paMiddlebury College muVermont. Tsvagiridzo yavo yemazuva ano inoshandisa mamodheru uye emhando yekupindura mibvunzo yakawanda pamusoro pemafambiro nemaitiro munzvimbo nenzvimbo dzekunyorera, senge maitiro emurairidzi nezvehutano uye kuzvitarisira, kuita kwemurairidzi nemagwaro epanzvimbo yekunyora, uye maonero evadzidzi nezvenzvimbo dzekunyora. . Parizvino anogara muVermont, Genie anofarira kushambira kwemvura yakavhurika, kukwira makomo, uye kusimudzira maitiro ekushanda zvakanaka munzvimbo dzebasa dzedzidzo yepamusoro. Ivo vanga vari rakabudiswa in tsika, Chinyorwa cheKunyora Tsvakurudzo, Iyo Journal Yekunyora Analytics, Kudzidzisa Chirungu muKoreji Yemakore Maviri, Tsvagiridzo mu Online Literacy Dzidzo, kairos, Mhiri kweDisciplines, Nyaya yeMultimodal Rhetoric, uye mune akati wandei akagadziridzwa muunganidzwa (Utah State University Press, Parlor Press). Bhuku ravo rekutanga ndiro rakagadziridzwa muunganidzwa Hutano uye Kuchengeta Munzvimbo Yekunyora Basa, chirongwa chedhijitari chakavhurika. Bhuku ravo razvino, Zvisina kunaka: Kutsvaga Hutano muNeoliberal Writing Center uye Beyond iri pasi pechibvumirano neUtah State UP.
Summer Institute Vatungamiriri:
Jasmine Kar Tang (iye / wake) anofarira kuongorora kuti mharadzano yeWomen of Colour feminisms uye Writing Center Zvidzidzo inotaridzika sei mukunyora kubvunzana, kuita kwevatariri, kufambisa boka, uye minutiae yebasa rekutonga. Mwanasikana wevabvakure kubva kuHong Kong neThailand, anga achizeya pamusoro pezvemagariro evanhu ekuti simba rerudzi rinoitwa sei pamutumbi weAsia kuUS kunyora nzvimbo. Jasmine anoshanda paYunivhesiti yeMinnesota-Twin Cities seCo-Director weCentre for Writing uye Minnesota Writing Project uye senhengo yeAffiliate Graduate Faculty muKuverenga uye Rhetorical Studies. Jasmine anoshandisawo kudzidziswa kwake kune rake sedhiramaturg yeAniccha Arts, yekuyedza kuita zvehunyanzvi inobatanidzwa muTwin Cities.
Eric Camarillo (iye / iye / ake) ndiye Mutungamiriri weLearning Commons paHarrisburg Area Community College kwaanotarisira kuyedzwa, raibhurari, rutsigiro rwevashandisi, uye masevhisi ekudzidzisa evadzidzi vanopfuura zviuru gumi nezvinomwe pamakampasi mashanu. Chirongwa chake chekutsvagisa parizvino chakatarisana nenzvimbo dzekunyora uye maitiro akanakisa mukati menzvimbo idzi, antiracism sezvazvinoshanda kune yekunyora nzvimbo maitiro, uye kuti maitiro aya anochinja sei mune asynchronous uye synchronous online modalities. Akaburitsa mukati Iyo Peer Wongororo, Praxis: Yekunyora Center Journal, uye The Journal of Academic Support Programs. Akapa tsvakiridzo yake pamisangano yakawanda inosanganisira International Writing Center Association, Mid-Atlantic Writing Center Association, uye Musangano weKoreji Kuumbwa uye Kukurukurirana. Parizvino ndiye Mutungamiriri weNational Conference on Peer Tutoring mukunyora uye Book Wongororo Edhita we The Writing Center Journal. Iye zvakare mukwikwidzi wechiremba kuTexas Tech University.
Rachel Azima (iye/ivo) ari mugore rake rechigumi rokutungamirira nzvimbo yekunyora. Parizvino, anoshanda seKunyora Center Director uye Associate Purofesa weKudzidzira paYunivhesiti yeNebraska-Lincoln. Rachel ndiye Sachigaro Emeritus weMidwest Writing Centers Association Executive Board uye mumiriri weMWCA weIWCA. Tsvagiridzo yake yekutanga uye kufarira kwekudzidzisa ndeyekugarisana, kunyanya kusarura, kururamisira munzvimbo dzekunyora. Basa raRachel rakabuda munguva pfupi yapfuura Kunyora Center Chinyorwa uye iri kuuya mune ese ari maviri WCJuye tsika. Basa rake razvino rekutsvagisa naKelsey Hixson-Bowles naNeil Simpkins rakatsigirwa neIWCA Research Grant uye rinotarisa pane zvakaitika kune vatungamiriri vemavara munzvimbo dzekunyora. Ari kushandawo naJasmine Kar Tang, Katie Levin, naMeredith Steck paCFP yemuunganidzwa wakagadziridzwa pakutariswa kwenzvimbo yekunyora.
Violeta Molina-Natera (iye / her / hers) ane Ph.D. muDzidzo, MA muLinguistics neSpanish, uye Murapi Wekutaura. Molina-Natera iMubatanidzwa Muzvinafundo, muvambi uye mutungamiriri weJaveriano Writing Center, uye inhengo yeKukurukurirana neMitauro Research Group paPontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). Ndiye muvambi uye aimbova purezidhendi weLatin American Network of Writing Centers uye Zvirongwa RLCPE, nhengo yebhodhi re: International Writing Center Association IWCA, inomiririra Latin America, Latin American Association of Writing Studies muDzidzo yepamusoro uye Professional Contexts ALES, uye Transnational. Kunyora Research Consortium. Molina-Natera zvakare mupepeti wezvinyorwa zvechiSpanish zvechikamu cheLatin America cheInternational Exchanges pakudzidza kwekunyora kweWAC Clearinghouse, pamwe nemunyori wezvinyorwa uye zvitsauko zvebhuku nezvenzvimbo dzekunyora uye zvirongwa zvekunyora.
Yapfuura Zhizha Institutes